Wararkii udambeeyey Xaaladda Towfiiq, Puntland oo wali diidan wada hadal & Odayaasha deegaanka oo go’aan cad qaatay
GAALKACYO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa gurmatay sidii loo joojin lahaa dagaal ka dhacay deegaanka Towfiiq ee barriga gobalka Mudug, halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamo ka kala tirsan labada maamul ee Galmudug & Puntland, laakiin guddiga ay dawladdu u dirtay ayaa ahaa saraakiil ciidan oo ciidamo kala dhexgaysa labada dhinac.
Maamulka Puntland ayaa ku eedeeyey dawladda Faderaalka ee Soomaaliya in ay hurinayso colaada Towfiiq, ayna si gaar ah u garab istaagtay mid kamid ah dhinacyada dagaalamaya, laakiin eedeyntaas wey diiday dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Taliyaha ciidamada Lugta iyo dhulka ee dawladda Soomaaliya Jeneraal CabdiXamiid Maxamed Dirir oo ka soo jeeda Puntland ayaa dawladda Faderaalku u xilsaartay in la kala dhexgalo labada dhinac, sidaas oo kalena la kala qaado maleeshiyaadka dagaalka.
Jeneraalkan oo ay wehliyaan saraakiil ciidan oo katirsan kuwa Xoogga dalka ayaa gaaray Towfiiq, xili uusan wanaagsaneyn xariirka kala dhaxeeya Puntland, waxaana ka hor tagidooda Towfiiq ka baxay magaaladaas maamulka gobalka Mudug ee Puntland.
Wada hadalo gaar ah oo dhexmaray Puntland iyo Odayaasha deegaanka ayaa looga wada hadlay arrimaha la xariira dagaaladii dhacay, waxaana Puntland ay sheegtay in aysan raali ka aheyn wada hadal aysan qeyb ka aheyn nidaamka maamul, sidaas oo kale waxay sheegeen in ay Xukuuamdda Soomaaliya ujeedooyin siyaasadeed ka leedahay gobalka Mudug.
Ka sokow, arrimihii dhacay taliska ciidamada dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxay shalay galab wada hadal saacado qaatay la yeesheen waxgaradka Towfiiq iyo Saraakiisha ciidamada Puntland ee kusugan halkaas, waxay isku afgarteen xalayba heshiis xabad joojin ah iyo in laga wada hadlo wixii dhacay.
Odayaal kasocda labada dhinacba ayaa iskugu imaanaya duleedka Towfiiq, waxaana ammaanka sugaya ciidamada dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, wada hadalkan dhanka Galmudug waxaa uga qeybgalaya maamulka gobalka Mudug iyo xubno kala duwan oo ka yimi Dhuusa-Mareeb.
Laakiin dhanka Puntland ma jirto cid matalaysa oo madasha joogta, marka laga reebo Odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada ee kusugnaa deegaankaas, taas oo sababta lagu sheegay in ay tahay in aysan Xukuumadda Garoowe la dhacsaneyn habka wada hadalkan.
Xariiro aan la sameynay maamulka gobalka Mudug ee Puntland wey ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrimahan ka socda Towfiiq, waxaanse kasoo xignaynaa xubno aad ugu dhaw Wasaaradda Arrimaha gudaha in ay Puntland diiday in ay qeyb ka noqoto wada hadal aysan xogtiisa heynin.
in la xabadeeyo ayey aheyd nacaskaas la soo diray, ee ay isaga horta towfiiq dhigaan,. hagu baraarugaane wixii soo diray.